Qormo:Dhawaaqii rasaasta dhawaaq baa bedelay! | Warfaafiye
Warfaafiye Qormooyinka	Qormo:Dhawaaqii rasaasta dhawaaq baa bedelay!
Nov 30th, 2012 – by admin0
Muqdisho (Xeebta Jazeera)- Dadka qaar riyo maalmeed ayey la tahay in aysan madaafiic ka dhaceyn Muqdisho, rasaas wiifeysa aysan dad jidadka ku dileyn misena iska-hor-imaadyo beeleed aan warbaahinta laga sii deyneyn.
La laab bogii guduudnaa ee wararka dagaalka, xasarad iyo welwelka leh uu lagu qori jiray, waxaana bedelay bog cad oo rajo xambaarsan walow uu wato su’aalo weli jawaab u baahan.
Marka aad dhex mareyso xaafadaha Muqdisho daryanka iyo shanqarta is wada qabsanaya mar qura eek a yeereysa guryaha dib loo dhisayo kama tiro yara shanqartii magaalada ka dhaceysay xilligii ay caasimada ay dhan walba kaga hoobanayeen Madaafiicda aan loo meel dayin.
Kala duwan shalay iyo manatee! Meeshii sidaas ahayd waxaa haatan lagu diimayaa guri dunsan ama derbi kaliya ee laga arki karo raadadkii madoobaa ee dagaalada sokeeye.
In kastoo hoteelka wadadaasi ugu caansan uu ahaa Hotelkii Maka Al Mukarama ee uu lahaa Cali Mahdi Maxamed, haatan waxaa ku soo biiray hoteelada kala ah Hotel Barwaaqo, Hotel Kuweyt, Tourist Hotel, Hotel Nahru Niil, Hotel Xaaji Raage iyo Hotek Maka Al Mukarama oo isna dhisme iyo dayactir yaab lihi ku socdo, dhawaanna la filayo in uu hawl galo.
Waxaa intaas wehliya, carwooyin waaweyn oo laga dukaameysto, maqaayado raashiin macaan, dukaamo lagu iibiyo qalabka kooraanka ku shaqeeya (Electric) iyo farmashiyeyaal. Doobi (Dry cleaner) casri ah oo indhaha saxaafadda caalamka soo jiidatay ayaa laga furya isla wadadaasi.
Qolkii aan jiifay oo aan salad subax in aan dukado aan uga soo baxay ayaan u soo laabtay isaga oo dhinac dhan ka dunsan oo uu galtaan habow ah haleelay, laakiin dagaal ayaa ka socday goob aan aad uga fogeyn meesha aan deganeyn.
FacebookBecome our fan	NALA SAAXIIB	November 2012